सिन्धुपाल्चोक पहिरो अपडेटः ७ जनाको शव फेला, २४ अझै बेपत्ता ! « MNTVONLINE.COM
सिन्धुपाल्चोक पहिरो अपडेटः ७ जनाको शव फेला, २४ अझै बेपत्ता !
काठमाडौँ । अबिरल वर्षाका कारण गएराति सिन्धुपाल्चोकको बाह्रबिसे नगरपालिका–७ मा पहिरो जाँदा बेपत्ता भएकामध्ये सात जनाको शव फेला परेको छ । बिहान पहिरो जाँदा बेपत्तामध्ये सात जनाको शव फेला परेको बाह्रबिसे नगरपालिकाका मेयर निमफुन्जो शेर्पाले जानकारी दिए ।
पहिरोमा अझै २४ जना हराइरहेको उनले बताए । माथि भीर र तल खेत भएको ठाउँमा पहिरो गएको उनले बताए । यसअघि पनि पहिरो जाँदा सम्भावित ठाउँहरू आँकलन गरी सुरक्षित गरिएको थियो ।
उनका अनुसार पहिरोमा १६ घर क्षतिग्रस्त छन् । घाइते तीन जनालाई एम्बुलेन्समा राखेर उपचारका लागि काठमाडौं पठाइएको छ । प्रहरीले भेटिएका शवहरूको पहिचान गरिरहेको छ । बेपत्ता भएकाहरूको प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेनाको टोलीले खोजी गरिरहेको मेयर शेर्पाले बताए ।
सिन्धुपाल्चोकमा पहिरो अपडेट : एकको मृत्यु, १७ जना बेपत्ता !